Izindlu zeNdalo zithengiswa kunye zeRhafu eCanada
ECanada (ECanada yaseFransi: [kanadɑ] mamela) lilizwe elikumantla eNyakatho Melika. Amaphondo ayo alishumi kunye nemimandla emithathu isukela kwiAtlantiki ukuya kwiPasifiki ukuya emantla kuLwandle lweArctic, egubungela i-9.98 yezigidi zeekhilomitha (3.85 yezigidi zeekhilomitha), isenza ilizwe lelizwe lesibini ngobukhulu ngommandla opheleleyo. Umda osemazantsi weCanada neUnited States, wolula ezinye iikhilomitha ze-8,891 (5,525 mi), ngowona mda mde mde emhlabeni jikelele. Idolophu enkulu yayo yiOttawa, kwaye iindawo zayo ezinkulu zedolophu ezinkulu yiToronto, Montreal, neVancouver. Iyonke, iCanada inabemi abambalwa, uninzi lwendawo yalo ilawulwa lihlathi kunye ne-tundra. Ngenxa yoko, abantu bayo bahlala ezidolophini, ngaphezulu kwe-80 ipesenti yabemi bayo bagxunyekwe kwizixeko ezikhulu kunye naphakathi, ene70% yabemi abahlala kumgama we-100 km (62 mi) yomda osemazantsi. Imozulu yaseCanada yahluka kakhulu kuyo yonke indawo yayo enkulu, esusela kwimozulu ye-arctic emantla, ukuya kwihlobo elishushu kwimimandla esemazantsi, enamaxesha amane ahlukeneyo. Iindidi zabantu bomthonyama bahlala kwindawo ngoku eyiCanada kangangeenkulungwane ngaphambi kokuba ikoloniyali iYurophu. Ukuqala kwinkulungwane ye-16th, uhambo lwase-Bhritane nolwe-France lwaphononongwa kwaye emva kwexesha lwazinza ecaleni konxweme lwe-Atlantic. Njengesiphumo seengxwabangxwaba ezahlukeneyo, iFransi yancancisa phantse yonke imimandla yayo eseNyakatho Melika e1763. Kwi-1867, kunye nomanyano lweBritish North Melika Melika Melika kwiConfederation, Canada yenziwa njengelizwe elinomanyano lwamaphondo amane. Oku kwaqala ukwamkelwa kwamaphondo nemimandla kunye nenkqubo yokwanda kokuzimela e-United Kingdom. Olu lawulo luzayo lwabonakaliswa nguRhulumente wase Westminster we-1931 kwaye wafikelela kwisigqibo se-Canada Act ye-1982, eyathi yabonisa ukuxhomekeka kwezomthetho kwipalamente yase-Bhritane. ICanada yidemokhrasi yedemokhrasi kunye nobukhosi obumgaqo-siseko kwisiko laseWestminster, kunye no-Elizabeth II njengokumkanikazi kunye nenkulumbuso esebenza njengosihlalo wekhabinet yomanyano kunye nentloko kurhulumente. Ilizwe ngumbuso ngaphakathi kweZizwe eziManyeneyo, ulilungu leFrancophonie kwaye lithetha iilwimi ezimbini kwinqanaba lomdibaniso. Iphakathi kweyona ndawo iphakamileyo kwimilinganiselo yamazwe elubala yokucacisa urhulumente, inkululeko yenkululeko, umgangatho wobomi, inkululeko yezoqoqosho kunye nemfundo. Lelinye lawona mazwe ahluka-hlukeneyo ngokwezithethe kunye neenkcubeko ezahlukeneyo, imveliso yokufuduka kwabantu abaninzi bevela kwamanye amazwe. Ubudlelwane obude nobunzima beCanada kunye ne-United States bube nefuthe elibonakalayo kuqoqosho nakwinkcubeko. Ilizwe eliphuhlileyo, iCanada inezona zinto zilishumi elinantandathu kwezona ziphezulu zengeniso ngomhlaba jikelele kunye nenqanaba leshumi elinesibini liphezulu kwiNdawo yoPhuculo loLuntu. Uqoqosho lwayo oluphambili lolweshumi ngobukhulu kwihlabathi, lixhomekeke ikakhulu kubutyebi bayo bendalo obuninzi kunye neenethiwekhi ezphuhlisiweyo zorhwebo zamanye amazwe. ICanada yinxalenye yamaziko amakhulu aphesheya kwezorhulumente kunye naphakathi koorhulumente kubandakanya neZizwe eziManyeneyo, uMbutho waseNyakatho yeAtlantic, i-G7 (eyayisakuba yi-G8), iQela leShumi, iG20, isiVumelwano saseMelika soRhwebo saseMelika kunye ne-Asia-Pacific Economic Iforum yokusebenzisana.